» किन लगिन्छन् बुर्किना फासोका सुनखानीमा महिला ?
किन लगिन्छन् बुर्किना फासोका सुनखानीमा महिला ?
२०७८ बैशाख २५, शनिबार १४:४८
सेकाओ, बुर्किना फासो । मानव तस्करहरुले ब्लेसिङलाई कुटपिट र लागूपदार्थ खुवाउन थालेको महिनौं बितिसके । यी २७ वर्षीया ब्लेसिङलाई एउटा सुनखानीबाट अर्कोमा पु–याउँछन् । हरेक रात उनले २ डलरभन्दा कममा दर्जनौं पुरुषसँग रात बिताउनु परेको छ ।
सन् २०१९ डिसेम्बरमा आफूलाई कब्जामा राख्ने महिला कतै लागेको मौका छोपेर ब्लेसिङ ठूलो साहसका साथ त्यस काठकोठरीबाट भाग्न सफल भइन् । स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा उनी र अरु छ जना महिला त्यहाँबाट भाग्न सफल भए । उनीहरु अन्ततः राजधानी औगाडोगुमा रहेको आप्रवासीका लागि खोलिएको राष्ट्रसंघीय केन्द्रको शरणमा पुगेका थिए ।
सुनखानीका शिविरमा थुनिनु पर्दाको ब्लेसिङको अनुभव नौलो भने होइन ।
बुर्किना फासो र नाइजेरिया दुबै देशले अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका भए पनि दुबै देशले मानव तस्करी विरुद्ध लड्न संयुक्त योजना नै बनाएका छैनन् ।
ब्लेसिङ नाइजेरियामा आफ्नै आमासँग मिलेर ऊखु र पिठोको व्यापार शुरु गर्न चाहन्छिन् । उनलाई थाहा छ, अरुहरुले आशा नै मारिसके । “धेरै केटीहरुले मिठो सपना देखेरै त्यता गएका हुन् । तर तस्करहरुले उनीहरुको आशा र सपना सबै समाप्त पारिदिन्छन् ।”रासस।एपी